Surf any Bermuda sy ny morontsiraka atsinanan'i Etazonia: antenaina fa mandrahona ain'olona io
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Surf any Bermuda sy ny morontsiraka atsinanan'i Etazonia: antenaina fa mandrahona ain'olona io
Septambra 10, 2018
Mivonto any Bermuda sy ny ampahany amin'ny morontsiraka atsinanana amerikana ny fivontosana vokatry ny rivodoza Florence. Ireo fivontosana ireo dia mety hiteraka fisamboaravoaran-doza atahorana ny fiainana ankehitriny. Ny mpizahatany sy ny onja any an-toerana dia tokony hijanona tsy ho ao anaty rano.
Mivonto any Bermuda sy ny ampahany amin'ny morontsiraka atsinanana amerikana ny fivontosana vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Florence. Ireo fivontosana ireo dia mety hiteraka fisamboaravoaran-doza atahorana ny fiainana ankehitriny. Ny mpizahatany sy ny onja any an-toerana dia tokony hijanona tsy ho ao anaty rano.
Tamin'ny 1100 AM AST (1500 UTC), ny mason'ny Hurricane Florence dia teo akaikin'ny latitude 25.0 Avaratra, bujur 60.0 Andrefana. Miroso miankandrefana i Florence akaikin'ny 13 mph (20 km / h). Hetsika andrefana-avaratra andrefana miaraka amin'ny fitomboan'ny hafainganana mandroso no andrasana mandritra ny roa andro manaraka. Ny fihodinana mankany avaratra andrefana dia vinavinaina hitranga amin'ny alin'ny alarobia alina. Amin'ny lalan'ny vinavina, ny afovoan'i Florence dia hiampita ny Ranomasimbe Atlantika atsimo andrefana eo anelanelan'i Bermuda sy Bahamas ny talata sy alarobia ary hanatona ny morontsirak'i South Carolina na i North Carolina amin'ny Alakamisy.
Ny angon-drakitra satelita dia manondro fa ny rivotra mahery maharitra dia nitombo hatramin'ny 115 mph (185 km / h) miaraka amin'ny rivotra mahery. Hurricane sokajy faha-3 ao amin'ny Scale Wind Wind i Saffir-Simpson i Florence.
Andrasana ny fanamafisana bebe kokoa, ary antenaina ho rivodoza mahery vaika mampidi-doza indrindra hatramin'ny alakamisy i Florence.
Ny rivodoza mahery dia mipaka hatrany amin'ny 30 kilaometatra avy eo afovoany ary ny rivotra tropikaly-tafio-drivotra dia mivoaka hatrany amin'ny 45 km.
Ny tsindry afovoany farany ambany indrindra dia 962 mb (28.41 santimetatra).
Ny rivodoza Florence dia mihombo haingana eo amin'ny lalany mankany amin'ny morontsiraka atsinanana ary efa sokajy 4 misy rivotra 130 mph izao, hoy ny National Hurricane Center tamin'ny fanavaozana manokana. Tombanana hatanjaka hatrany amin'ny 150 mph i Florence, alohan'ny hidinan'ny tany amoron-tsiraka atsinanana na Mid-Atlantika Alakamisy alina.
Matetika ny vinavinan'ny maodelin'ny solosaina dia mametraka ny tafio-drivotra mba hidina eo anelanelan'ny South South Carolina sy ny Outer Banks any Avaratra, na dia mety hisy aza ny fiovana amin'ny lalana, ary ny fiantraikan'ny tafio-drivotra dia hitatra lavitra mihoatra ny toerana misy ny landfall. Noho ny fisalasalana sy ny fotoana ilaina amin'ny famindrana, dia namoaka baiko fandefasana mandidy ny tompon'andraikitra any North Carolina Dare County sy Hatteras Island.
Nanjary tsy dia azo inoana loatra hoe hiova ho any an-dranomasina i Florence ary hitsitsy ny morontsiraka atsinanana amin'ny tafio-drivotra mahery, tondra-drano ary rivotra. Misy aza ny filazana fa hiadana na hijanona any afovoan-Atlantika ny rivodoza amin'ity herinandro ity, izay mety hiteraka orana mahatsiravina.
Manam-pahefana misahana ny fiaramanidina sivily ao Thailand ny mametraka fitsipika vaovao momba ny fiaramanidina
Mpanoratra serasera marika voatendry any amin'ny trano fandraisam-bahiny any Corinto